Ihe e dere n’akwụkwọ n’akụkụ a na - akpọsa ụgbọ mmiri na - egbochi ụlọ ọrụ na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ebe ebe usoroiheomume>Ụzọ n’Ụlọ Ọkụ
Elu ígwè ahụ a na - akpọ n’ahụ́ n’ihe ndị dị mma na ihe ndị a na - eme n’ụda. Ọ pụrụ inye aka izochi usoro ihe ndị a na - apụ n’ahụ́, ịnyịpụta ya na ịnọ n’ụlọ ahụ́, ebe ọ na - emekwa ka a ghara inwe nchebe na ụgbọelu dị mma. Ịtụle àgwà na - enye ìhè nke elu a na-agbụ, ọ pụrụ ime ka ọnọdụ na - akpali mmasị n’ebe ọkà mmụta dị iche iche.
Ụlọ n’Ebe a na - akpọ n’Ụlọ Ọcha
Ụlọ n’Ụlọ n’Ebe a na - akpọ n’Ụlọ
Ihe ndị a ga - atụle:Nhọrọ Ihe Onwunwe.
Nnukwu ike-na-obo - ihe mkpụrụ ihe na-oyi na - eme ka ndụ karịrị ogologo nke ndị na-afọ.
Mmadụ a na - enwe ụda n’ahụ́.
A na - eguzogide ọkụ na ọkụ.
Ana m dị mfe ịcha ọcha na ịkwa.
N’ihi ya, anyị na - atụ aro aro aluminium, akụkụ a na - enweghị ntị na akụkụ ọkụ dị ka ihe ndị dị mma a na - eme n’elu elu.
Ihe e dere n’Ụlọ Akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị họọrọ usoro n'ụda, ụdị ọdịdị, mmetụta n'ìhè, e kwesịrị ịtụle mmetụta n’ụda ụda na ihe omume a na - enwe ụda.
Ụzọ ndị a na - eme n’ebe a na - akpọ n’ahụ́ dị mfe.
Nchọpụta ahụ na - egosi na ebe ọhụrụ gaa karịa 10% dị ukwuu nwere mmetụta dị mma n’ụda. Ọ bụrụkwa na a na - enwe nnukwu n’ebe ahụ, otú ahụ ka a na - enwe mmetụta ọkụ n’akwụkwọ.
Ihe e dere n’Aluminum a na - akpọsa
Ọnụ ọgụgụ a na - akpọ ụgbọ mmiri a na - akpọ n’ahụ́.
Ihe a na - eme n’ahụ́ bụ ihe kasị a na - emekarị, bụ́ nke pụrụ ime ka a na - enwe mmasị dị mma ma na - enwe ọkụ. Anyị na - enye ụlọ ọrụ a na - eme ka a na - enwe ụdị ụcha RAL.
Ochie:Ịgba Ụlọ Ọkụ
Ọzọrụ:Ahụ ígwè a gbawụsa
Mwagụ̀ aluminium ceiling panels, mesh ceiling, metal perforated screen,
Pọtụtụ bụ́ maka nhọrọ nke inyogo ihenha
Pọ̀ọ́hata bụ́ maka nhọrọ nke ahụInyogo ihe ọma:Ihe e ji akụkụ n’ihe ndị dị mkpa n’ihe ndị a na - enwe mmasị n’ebe ego, ígwè, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmiri ọgwụ. Ọ bụkwa akụkụ nke obere mkpụrụ ndụ n...
Ụdị paneel n’elu aluminium
Ụdị nkePaneel aluminium elu:1. Elu Grid eluMgbakọ ụgbọ mmiri osisi osisi: ọ̀tụ̀tụ̀ aluminium na nrụkọọkọ aluminium, mgbe e tinyere ya, o nwere àgwà ndị a na - eme atụmatụ ọnụ na iji ihe atụ ọhụrụ. A n...
Ụzọ ịnyụnye nke aluminium n'olusi
Ụzọ ịnyụnye nkePaneel aluminium elu:Nke a na - eme ka a na - enwe ụdị ihe a na - eme n’ahụ́.2. A ga - ebuli keel a na - akpọsa akpụ na mkpụkpụ n'oge kwesịrị ekwesị, ọ̀tụ̀tụ̀ dị n'etiti ndị a na-agbata...
Gịnị ka elu elu na - eleba anya?
(1) ỤkwụEluỌ na - eji ọchịchị karịa ụcha ala, bụ́ nke na - eme ihe omume ọma. A maara ụkpụrụ a dị ka nsogbu nke ndị okenye na ụmụaka. Ya bụ, ndị na - eto eto na ndị dị ala agaghị anabata aka ná ntị na...
Uru na ọnọdụ ndị a na - enwe mmasị n’ahụ́ ndị a na - akpọ aluminumu
Uru na ihe ndị na - enweghị ike n’ahụ́Paneel aluminium elu Uru: 1. Ọ na - enwe nnọọ mmasị n’ime ụgbọ mmiri, ihe ndị a na - akpọ n’ime ya na - esikwa ike ịkpọsa ihe ndị a na - eme n’ime ya. Ọ...
Oleekwanụ otú e si ele aluminium n’elu elu?
Gịnị banyere ya?Paneel aluminium elu?Nke a na - eme n’ahụ́. N'ozuzu, a na-azụ ọkụ aluminum gusset n'ụzọ dị elu n'azụ a na - ebubata n'agbata n'agbata, nke n'elu dị n'efu, enweghị ọdịiche dị iche ụcha,...
Ụlọ elu nke e ji aluminium
E nwere ụdị ngwá ọrụ abụọ a na - enwe n’elu eluPaneel aluminium elu: Keel akụkụ mkpụkpụ na nkịtụ keel, n’ihi na osisi ahụ ga - eme n’ihi mmetụta nke okpomọkụ na ụkụ anyị maara a na - enwe ụgwọ na n’ọn...